Maalin: Janaayo 30, 2019
Dhismaha Jid-gooyooyinka lugeynaya ee ku xeeran Tatvan Gar Keenista Tijaabinta Dhibic Dhismeedka Dhismaha Waddooyinka Waddanka Turkiga 5. Agaasinka Iibsiga Gobolka (TCDD) ayaa xaddidaya qiimaha 2018 / 694481 GCC 2.484.743,11 TL iyo qiyaastii. [More ...]
Xariiqda Ankara-Eryaman, oo ah halka qofkii lagu dilay 9 iyo qofkii 86 ee ku dhaawacmay Saldhigga Yenimahalle Marshall ee Ankara, la furi doono iyadoo la dhammaystirayo shaqada calaamadda qayb ahaan. Bixitaanka Ankara Station iyo irridda Eryaman Station [More ...]
UTİKAD, Ururka Soosaarayaasha Adeegga Gaadiidka iyo Saadka ee Caalamiga ah, ayaa soo xirtay gacmaheeda si ay u qaabeeyaan mustaqbalka waaxda. UTİKAD Summit 2018-In 2018, UTİKAD waxay iftiimineysaa mustaqbalka waaxda lojistikada iyadoo la adeegsaneyso Saadka Saadka mustaqbalka. [More ...]
Iyada oo lagu dhawaaqayo rasmiga ah ee uu soo saaray Agaasimaha Guud ee TCDD, waxay ku dhawaaqday inay shaqaalaysiinayso dadka naafada ah isla markaana ay hore u xukuntay shaqaale dawladeed oo ka dhex shaqeeya xafiiska. Iyagoo ku dhawaaqaya Agaasinka Guud ee Tareenka Gobolka [More ...]
Scotty, codsi wareega ah oo loogu talagalay fududeynta nolosha magaalada oo leh teknolojiyad, 2018 ayaa ku dhawaaqay xogta safarka. Scotty, oo sameeyay 2018 milyan oo kiiloomitir 25 ah, wuxuu badbaadiyey 45 milyan oo daqiiqo oo ay ku noolaayeen dadka deggan Istanbul ee taraafikada. Sanadka oo dhan [More ...]
Waxaad naftaada ka buuxin kartaa shidaalka Aytemiz, ee iskaa wax u qabso!
Aytemiz waxay bilaabeen jasiirada servis is-service X halkaasoo xarumaha 30 ay ka buuxin karaan shidaalka ayna bixiyaan qiimaha macaamiisha. Is-shidaalsiinta waxay u oggolaanaysaa macaamiisha inay wax iibsadaan oo ay ku bixiyaan matoorka iyaga oo aan waqti dhumin [More ...]
Degmada Samsun ee Magaalo-weynta SAMULAŞ waxay abaabushay olole tabaruca dhiig ah oo lagu taageerayo Barnaamijka Bixinta Dhiiga Badbaadinta Qaranka iyo Mashruuca Türkök oo ay fulisay Mashruuca Bisha Cas ee Turkiga ee Mashun gaadiid loogu wareejinayo Dawlada Hoose ee Magaaladda Samsun [More ...]
RayHaber 30.01.2019 Warbixinta Shirka
Dhismaha Jid-gooyooyinka lugeynaya ee Agagaaraha Sahayda Saldhigga iyo Dayactirka Alayunt-Balıkesir Nidaamka Heerka Feejignaanta Nidaamka Feejignaanta iyo Qalabka Bixinta Pandrol Clip (e1887) Tareenka taxanaha ah ee Xareynta Haydarpaşa [More ...]
Duqa Magaalada Antalya ee Magaalada Manderes Türel ayaa sheegay inay iskudayaan inay faafiyaan wacyiga ku aadan in baaskiilku yahay wadada ugu caafimaad badan ee aan u abuurin saameyn xun sida buuqa iyo wasakhowga hawada deegaanka. Madaxweyne Türel, sannadkan [More ...]
Salihli Jadwalka Casriga ah wuxuu tiriyaa Maalmaha Furitaanka
Wejiga koowaad ee (is-dhaafsiga) ee mashruuca is-weydaarsiga ee wadada weyn ee 'A96 İzmir-Ankara' ee ay bixiso Dowlada Hoose ee Magaaladda Manisa si loo hubiyo in nabadgalyada la raaco ee muwaadiniinta iyo in la yareeyo qulqulka taraafikada ayaa shaqeynaya maalmaha soo socda. [More ...]
Waddo kale oo ka soo jeeda jidkii Ishik oo u socday waddada Inkýlap
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sameyneysaa wado kale oo ka timaadda İzmit Işık Street una tagta İnkılap Street iyadoo howlaheeda ay ballaarineyso. Markii shaqooyinka kale ee wadada laga bilaabay Ikk Street ee ku yaal agagaarka Old Prison, waxaa la dhammeystirey aaga Radar qeybta Acıbadem Hospital, [More ...]
Maanta taariikhda 30 Janaayo 1923 “Heshiiska Orient Anatolian Railways Chester, ee la yiraahdo Mashruuca Chester, wuxuu ka gudbay Golaha Wasiirrada waxaana loo gudbiyay Golaha. 30 Janaayo 1929 1483 oo leh sharciga 23 May 1927 [More ...]